Warar Is-khilaafsan Iyo Khilaaf Laga Soo Sheegayo Saxiixayaasha Roadmap-ka | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > WARARKA	> Warar Is-khilaafsan Iyo Khilaaf Laga Soo Sheegayo Saxiixayaasha Roadmap-ka
Wararka ka imanaya magaalada Nayroobi ayaa kusoo waramaya in kulan ay lahaayeen saxiixayaasha Roadmapka uu Madaxweyne Soomaaliya Md. Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka biyo diiday kana baxay shirkaa,si cadho lehna uu uga baxay kulankaas, kuna soo wajahan yahay Muqdisho.
Ma cadda waxa keenay arrintaa,waxaana la sheegay in kulankani uu yahay mid ka dambeeyay shirkii ay saxiixayaasha Roadmap ku ay la yeesheen Kilinton.
Waxaana soo baxaya warar sheegaya in aragtiyo cusub oo lakala qabo iyo fikrado ay mas’uuliyiinta qaarkood soo jeediyeen ama la soo jeediyay laysku mari waayay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in arrimuhu la xidhiidhaan xulista Baarlamaanka, cidda xulaysa ama soo magacaabaysa,wax kabadalid ama kala hormarin doorashada madaxweynaha iyo ta Baarlamaanka.
BBC da laanteeda af-soomaaliga ayaa sheegtay in uu madaxweyne Shariif uu kabaxay shirkaa uuna waheliyo,wakiilkii Ahlu Sunna ugu jiray saxiixayaasha Roadmapka, sidoo kalana uu ka dhoofay garoonka Madaxweyne Shariif.
Waxay kaloo sheegtay in intii kale ay shirkoodi wataan uuna kaqayb galayo Ergay Mahiga.
Si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata in khilaaf ama wax laysku diidan yahay ay jirto ayna soo bixi doonaan waqtiyada inagu soo food leh.
(Akhri:Madaxweyne Shariif oo dalka kusoo laabtay kana warbixiyay shirarka Nayroobi, hase ahaatee sheegay inuu usoo baxay hawlo)
Japan – Hiroshima marks 67th anniversary of atomic bombing Sudan, South Sudan reach deal on oil before adjourning final phase of negotiations